Faallo :- Prof Axmed Ismaciil Samater Ma Mari Doonaa Wadadii Xisbiga Kulmiye Mariyey Jaamac Shabeel |
Faallo :- Prof Axmed Ismaciil Samater Ma Mari Doonaa Wadadii Xisbiga Kulmiye Mariyey Jaamac Shabeel
Hargeysa (GNN):- Waxa muuqata inay siyaasadda ku kala durkeen Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo Macalin Axmed Ismaaciil Samatar, oo ay halgan siyaasadeed oo xoogan u soo wada galeen in Madaxweyne Biixi iyo xisbigiisa KULMIYE, ku guulaystaan doorashadii kal hore dalka ka dhacday.
Axmed Ismaaciil Samatar, ayaa toddobaadkan qormo uu ku qoray shabakadda wararka ee Somaliland Chronicle, wuxuu ku duray hoggaaminta Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi, oo uu ku eedeeyay inuu ka leexday waxyaabihii uu xisbiga KULMIYE ku ololeeyay doorashadii madaxtooyada ee 2017.
Madaxweyne Biixi iyo Macalin Samatar, waxa saaxiibtinimadooda siyaasadeed hore loogu qeexay xumbo deg deg u gudhi doonta, iyadoo laga shidaal qaadanayo sida deg-dega ah ee ay isugu milmeen siyaasad ahaan iyagoon aqoon sal balaadhan hore isugu lahayn.
Axmed Ismaaciil Samatar, waxa lagu tilmaamaa nin calool xaadhan oo aan qarsan dareenka uu qabo iyo aragtidiisa siyaasadeed, waxaana sidoo kale lagu tilmaamaa nin fudud oo si aan hubsiimo lahayn u dhex gala badweynta siyaasadda, una jeediya cidda aanu hoggaamintooda la dhacsanayn eeddo siyaasadeed oo aanu ka fiirsan. Inkastoo uu yahay macalin jaamacadeed oo wax ka dhiga jaamacadaha dalka Maraykanka ee horumaray, haddana waxa ay dad badani u arkaan inaanu la haysan wacyiga siyaasadda gudaha ee Somaliland.
Madaxweyne Biixi, ayay isna saaxiibadii ku tilmaamaan hoggaamiye aan iloobin ninka ay maalin uun siyaasad isku seegaan amaba si uun uga horyimaada jidka uu u marayo damaciisa hoggaamineed. Wuxuu caan ku yahay isna inaanu qarsan Karin dareenka uu shakhsi ama koox siyaasadeed ka aaminsanyahay.
Inkastoo uu Madaxweyne Biixi yahay nin furfuran oo kaftan iyo dood badan, haddana saaxiibadii waxa ay ku sheegaan inaanu jeclayn cidda hoggaamintiisa ama aragtiisa siyaasadeed ka hortimaada. Tusaalena waxa loo soo qaadan karaa sida uu uga takhalusay saaxiibkiisii mudada dheer ee Jaamac-shabeel oo eeddo kala duwan oo uu xukuumadiisa u jeediyay ku waayay xilkii xisbiga KULMIYE.
Inkastoo uu Professor Samatar leeyahay miisaan siyasadeed oo culus, haddana waxa suurtogal ah in Professor Axmed Ismaaciil Samatar, mari doono halkii uu maray Jaamac-shabeel, oo ay qormadan uu ku dhaliilay hoggaaminta Madaxweyne Biixi sabab u noqon doonto inuu lumo isfahamkii siyaasadeed ee isaga iyo Madaxweyne Biixi.
Si kastaba ha ahaate , waxa uu ifaafalaheedu muuqdaa hirdan siyaasadeed oo u bilaabmi doona Madaxweyne Muuse Biixi iyo Macalin Axmed Ismaaciil Samatar, waana kuwan qodobada uu Samatar ku eedeeyay Madaxweyne Biixi.